उनी अनि विधाता | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 05/13/2011 - 20:53
"सानी, सानी" कसैले एकाबिहानै मलाई बोलाउँदै थियो । म भर्खरै बाबुलाई गृहकार्य गराउन बसेकी थिएँ । यो सम्बोधनले तान्यो मलाई र म बाहिर हेर्न बाध्य भएँ ।
"किन बिजय ? आऊ न भित्रै, " मैले अघि पछि झै मुसुक्क हाँसेर सोधें र भित्र आउन आग्रह गरें ।
"आमा सिकिस्त हुन्हुन्छ। सानीलाई बोलाएर ल्याउनु भन्नुभएको छ। " केही अत्यासिएको आवाजमा बिजयले भन्यो ।
"बिजयको आमा केही महिना देखि बिरामी थिइन् भन्ने त थाहा थियो तर अचानक आज बिहानै किन बोलाएछ ? अस्ति मात्रै म पुगेर आएको थिएँ ।" मनमनै यस्तै कुरा सोच्दै हत्तपत्त म सल भिरेर बिजयसँगै हिडें ।
"शहिद परिवारलाई पो रकम दिने भनेको हो त बिजयको बुबा किन गएको त?" मैले शंकास्पद रुपले मझिनीलाई प्रश्न गरेकी थिएँ।
मैले निकै कर गरेपछि मात्रै कसैलाई नभन्ने शर्तमा बिस्तारै" बिजयको साख्खै आमा म हैन तर म र बिजयको आमा सगेत्रै दिदीबहिनी थियौं। " भनिन्। उनको आवाज मेरो कानमा ठोक्किए लगत्तै हावामा यसरी विलिन हुन पुग्यो कि त्यो कोठाको भित्तामा पनि उग्न पाएन । छोरा छोरीले सुन्लान भन्ने डरले होला मझिनी मसिनो स्वरमा मसँग कुराकानी गर्दैथी ।
"बिजयको आमाको जनयुद्धकालमा माओवादीमा लागी हिंड्दा सेनाको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।" मझिनी दुखित हुदैँ भन्दै थिइन् । उनमा यो घटनाको पुन:स्मरण हुनपुगेको थियो सायद जुन उनले बिर्सिसकेकी थिइन्।
मेरो आखाँहरू आश्चर्यले खुलै थियो। उनी भन्दै थिइन् "हामीले दिदीलाई त्यसरी साना साना बच्चाहरू छोडेर नजानको लागि धेरै अनुनय गरेका थियौ यहाँ सम्मकी बिजयको बुबा पाउ नै पर्नुभएको थियो तर खै कस्तो भुत चढेको थियो मेरो दिदीमा कुनि हाम्रो लाख कोशिसका बाबुजुत पनि उहाँ माओवादीको जनयुद्धमा होमिनुभयो ।
उनी भन्दै थिइन् " दिदीलाई छिमेकीले नै चुकुली लगाएर आफ्नो छोरा र श्रीमान भेट्न आउँदा सेनाको गोलीबाट मारिएकी थिइन्। त्यसपछि यी साना साना बाबुहरूको बिल्लीबाँठ हुने देख्रेर आमा बाले नै मलाई बिजयको बुबासँग विवाह गरिदिनुभएको हो। "
"अहँ गरिन किन भने म आफै पनि यो बाबुहरूको बिक्षिप्त भएकी थिए। मलाई किन किन यो बाबुहरूको लागि मैले आफ्नो स्वार्थ हेर्न हुन्न भन्ने लग्यो । यिनीहरूप्रति असीम माया पलायो। त्यसैले मञ्जुर भएँ। "
एकछिनपछि मैले मेरो उडदै गरेको मनलाई यथास्थितिमा ल्याएँ अनि "बिजयलाई थाहा छ त तिमी उसको आमा हैन भनेर?" भनी सोधें ।
तर "उफ्" सम्म थिएन उनको मुखमा । कहिल्यै निराशाका धर्साहरू कोरिएन। निश्चिन्त अनि निर्धक्कको जीवन । कसैले जीवन बिताओस त मझिनीले जसरी सहज रुपमा दु:ख पीडालाई आत्मासाथ गरी ।
सायद उनी "सानी बिजयको बुबा फर्केर नाआउञ्जेल यी बच्चाहरूको रेखदेख गरिदिनु ल" भन्न चाहन्थिन् ।
भ्यालेनटाईम स्पेशल गजल